Dhismaha Kiimikada & Saliida & Gaaska | Tianjin Yixin tuuboyinka Qalabka Co., Ltd.
Dhismaha Kiimikada & Saliida & Gaaska
Iskaashiga Muddada Dheer ee CNCEC & Sinopec
Iyadoo 12 sano R & D, YIXIN mashiinada alxanka otomaatiga ah ayaa si ballaaran loo isticmaalay oo aad loogu amaanay CNCEC iyo Sinopec. Kuwaas waxaa ka mid ah, 13-kiimiko Dhisme, 16-kiimiko Dhismo, 6-da Dhismo ee kiimikada iyo shirkado kale oo badan waxay qaateen mashiinka alxanka tooska ah ee YXIN qaybo badan oo ka mid ah xaaladaha shaqo ee gudaha iyo dibada. Macaamiisha waxay ka jawaabaan in mashiinka alxanka tooska ah ee YIXIN uu yahay mid la qaadi karo oo ku habboon, wuxuu leeyahay waxqabad aad u fiican,, qaab alxamid qurxoon iyo heerka tolidda alxanka oo aad u sarreeya, taasoo si weyn u badbaadineysa kharashka shaqaalaha iyo hagaajinta waxtarka wax soo saarka.
HW-ZD-200 Waxaa Loo Adeegsaday Warshadaha Saliida & Gaaska
HW-ZD-200, oo loogu talagalay alxamida dhuumaha saliida iyo gaaska, waxay ku guuleysteen guul weyn shaqadooda goobta.
Shirkadda Tianjin Bomec Offshore Engineering Co., Ltd. waa shirkad ay wada leeyihiin shirkadda Bomec Offshore Engineering Co., Ltd. Waxay inta badan ku hawlan tahay naqshadeynta iyo dhismaha isku dhafan ee qaybo kala duwan, inta badan saliidda iyo injineernimada gaaska, dhirta gaaska dabiiciga ah macdanta. Shirkadda waxaa lagu taxay suuqa A-share ee 2016 waana mid xoogan. Mashruucani wuxuu qaatay habka qandaraaska furan, wadar ahaan 5 shirkadood ayaa kaqeyb qaatay (shirkad ku taal Shanghai, shirkad ku taal Shandong, shirkad ku taal Guangzhou, iyo shirkad ku taal Zhejiang). Intii lagu gudajiray howsha qandaraaska, qalabka alaab-qeybiyeyaal kaladuwan ayaa lagu qabtay goobta tartanka alxanka
Macaamilku wuxuu si adag u eegay waxqabadka mashiinka, waxtarka alxanka, sameynta, heerka baafinta ogaanshaha cilladaha iyo tilmaamayaasha kale. Ugu dambeyntiina, qalabka shirkaddayada ee YX-150 ayaa istaagay oo ku guuleystay dalabkii mashruucan. Iyadoo lala kaashanayo Bomec Offshore Engineering, mashruuca waxaa lagu iibsaday qaybo badan. Ilaa hadda, wadarta qadarka wax iibsiga wuxuu ku saabsan yahay 20 nooc.